Ywar Thar Lay (YTU): ရင်ထဲရောက် အလွမ်းဆိုင်
တကယ်တမ်း ဒီစာအုပ်ကို တလောလေးကမှ လက်ခံရရှိတယ်။ စာရေးသူ မဖြူနုနဲ့က လူချင်း မဆုံဘူး၊ မရင်းနှီးဖူးပေမယ့် သူရေးတဲ့စာကိုတော့ သိနေခဲ့တယ်။ ပထမစာအုပ် မြောက်ဖျားပိုင်းက အလွမ်းရာသီကနေ ခုစာအုပ်အထိ စာအုပ်ထွက်သမျှကို အမှတ်တရ လက်ဆောင်ရနေခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့ကထွက်လာတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ မြောက်ဖျားနဲ့ ခေတ်ရယ် အချစ်ရယ်ကိုနှစ်သက်မိပေမယ့် လောဘကြီးတဲ့ စာဖတ်သူမို့ထင်တယ် အမြဲပဲ ကျနော် နောက်ထပ်တခုခု ထပ်ရလိမ့်နိုးစိတ်နဲ့ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကံ့ကော်နဲ့လွင့်သောကမ္ဘာကိုတော့ ဆားမပါသေးတဲ့ဟင်းတခွက်လို ခံစားနေမိခဲ့တယ်။ အခုစာအုပ်အလွမ်းဆိုင်ကတော့ ဖတ်နေတုန်းကနေ ဖတ်ပြီးတဲ့အထိ ရင်ထဲကို ဒုတ်ဒုတ်ထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာက လူကိုရှိမြဲရှိတတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကနေ နည်းနည်းတော့ ပြောင်းလဲစေတတ်သလား၊ ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာမှာ ကိုယ်စည်းနဲ့ကိုယ် ငြိမ်ဆိတ်နေတတ်သူ၊ အလွှာတခု ရံထားတတ်သူတွေကိုမှ စိတ်မှတ်မဲ့ ရုန်းလွတ်လာစေတတ်သလား...."
ဒီစာပိုဒ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ သက်ပြင်းကို ခပ်ကြီးကြီးချလိုက်မိတယ်လေ.
မြတ်မော်နဲ့ နွေတို့ရဲ့ ငယ်ဘဝဟာ စိတ်ထဲကနေ အတိတ်ကိုရောက်အောင်လှုပ်နှိုးကြတယ်။ ကျနော် ငယ်ငယ်က ထူးစာပေဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်လေးမှာ စာဖတ်ချင်လို့ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို လုပ်အားပေးထိုင်ခဲ့ဖူးတာတွေ ပြန်သတိရမိစေတယ်။ စာအုပ်ကောင်းတွေဆို သိမ်းထားတတ်တဲ့ စာအုပ်ဆိုင်ရှင်ရဲ့ စာအုပ်တွေငှားဖတ်မှုကြောင့် စာကောင်းပေကောင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာတွေ အောက်မေ့မိစေတယ်။
ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးတယောက်ရဲ့ အတန်းကြီးက အမကြီးတယောက်ကို ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတာတွေဟာ ဟိုတစ ဒီတစ ရင်ထဲကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ တကယ်တမ်း အဲ့ဒီအမကြီး အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုတာ သူငယ်ချင်းတယောက် ကောင်းမှုကြောင့် သိရတဲ့အခိုက် ရင်ထဲက ဆပ်ပြာပူဖေါင်းလေး ခွမ်းကနဲ အသံတိတ်ကွဲသွားခဲ့ဖူးတာပဲလေ....
ပျော်ရွှင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ ရင်ထဲက တိတ်တခိုးချစ်မေတ္တာတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ နုနယ်ပျိုမြစ်ချိန်တွေကို သိမ်းထားဖို့ရာတော့ လုံလောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပါပဲ.
တချို့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ ဆုံဆည်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဇာတ်သိမ်းအထိတော့ မရှိခဲ့တတ်ကြဘူးဆိုတာ ကိုလင်းညိုနဲ့ နွေတို့ပဲ ရည်ညွန်းတာပဲ ထင်ပါရဲ့။ ကံကြမ္မာမျက်နှာသာ မပေးတဲ့အခါ ချစ်လိုလျက်နဲ့ ဝေးကြရတယ်လေ..ကျနော်နဲ့ ကျနော့ချစ်ခဲ့ဖူးသူလည်း လမ်းခွဲဝေးခဲ့ကြဖူးတာပဲ။
ကိုလေးရဲ့ ရင်ထဲက အသံတွေကို ကျနော်နားထောင်ဖူးသလား? ကျနော်က ကိုလေး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလိုလို။ အင်း ဟုတ်တယ်လေ ကျနော့ ငယ်ချစ်ဦးကို ကျနော်က ကျနော့ရင်ခုန်သံတွေ တစွန်းတစတောင် မပြခဲ့ဖူးတဲ့သူ။တလောက ဖုန်းထဲမှာ မေက ကျနော့ငယ်ချစ်ဦး အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေးတောင်မွေးပြီးပြီလို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ မေများ ရိပ်မိနေသလား စိတ်ထဲ သံသယတွေ ဝင်မိပြီး စိုးထိတ်ခဲ့ဖူးတယ်....
မဟုတ်သေးပါဘူး ဘော်ကြိုဘူတာဆိုတာ လေးနှစ်သားတယောက်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မှတ်မိစရာ မရှိဘူးလေ။ ကျနော် လေးနှစ်သားလောက်က လားရှိုးကို ရထားနဲ့ သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ဘော်ကြိုဘူတာကို ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါ ကျနော့ဘယ်လိုမှ မမှတ်မိဘူး။ ဘူတာရုံမှာ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ကို ကျနော် မြင်ခဲ့ဖူးသလား ဘယ်အချိန်ပြန်တွေးတွေး ဇဝေဇဝါ....
စာရေးသူက စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ထဲရောက် ထိုးဖေါက်ရေးချတတ်တဲ့အခါ စာဖတ်သူဟာ ဇာတ်ကောင်တွေကြားထဲ၊ဇာတ်လမ်းဖြစ်တည်ရာ မြို့ရွာတွေအထိ စိတ်ကောလူကော နှစ်မြုပ်သွားတတ်တယ်။ မဖြူနုရဲ့ အလွမ်းဆိုင်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တဲ့ အစီအရီညီနေတဲ့ စာအုပ်စင်ကို မြင်လိုက်ရသလို စိတ်ကျေနပ်မှုကို ပေးတယ်။ ဇာတ်ကောင်မှန်သမျှကို သေချာ နေရာ တကျ ဆွဲထုတ်လာပြီး အလိုက်သင့် ပြန်သိမ်းသွားတာလေးဟာ ငြိမ့်နေအောင်စီးတဲ့ ဒုဌဝတီကို မျက်ဝန်းရိပ်ထဲ အေးငြိမ့်ငြိမ့် ဖြတ်စီးသွားသလိုမျိုး......
မဖြူနုကတော့ ဇာတ်ကို သိမ်းမပေးသွားဘူး။ ဒီဇာတ်သိမ်းရဲ့ ခံစားလှိုက်ဖိုမှုမျိုးကို ဂျူးရဲ့ မရှိမဖြစ်မိုး ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာ ကျနော်တခါရခဲ့ဖူးတယ်။ သိင်္ဂါရရသကြားထဲက အဗ္ဘုတရသကို ဖြတ်ခနဲနေအောင် မသိမသာလေး ထိုးထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးလေ....
နေကြာရိုင်းတွေရယ် ဘော်ကြိုဘူတာရုံရယ် သီပေါရယ်ကတော့ အလည်တခေါက် သွားလည်ဦးမှပါလို့ ဆုံးဖြတ်စေတဲ့အထိ ဟောဒီ အလွမ်းဆိုင်စာအုပ်ဟာ စာမျက်နှာတွေကနေ တဆင့် ကျနော့ရင်ဘတ်ထဲကို တိုးယိုးပေါက် ဒုတ်ဒုတ်ထိကို ဝင်ရောက်နေပါတော့တယ်.......
Posted by ywartharlay-ytu at 9:38 PM
Labels: ခံစားချက်, မိတ်ဆက်, အမှတ်တရ ဘဝခရီး
မြရွှေဂူ ပတ္တမြားကိုလ ဝက်များက
ငြူစူစွာ ညွန်လူးကာ တိုက်နဲ။
Forward Email (15)
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (208)
Blog anniversary - ၂၀၀၇ မတ်လ ၂၇ ရက်က ပန်ဒိုရာ အမည်နဲ့ ဘလော့ဂ် စရေးခဲ့တယ်။ ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့လို့ မဆိုနိုင်ပေမဲ့ အရောင်တချို့ ထပ်ဖြည့်ထည့်လိုက်တဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုတော့ ဖြစ...
စကားလုံးတွေနဲ့ ထိရှလွယ်တဲ့ မမယ်ကိုး ရဲ့စာစုများ
Flowers in my yards - Write Myanmar3 Here ညစာ။ ။ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်။ heart shape ဖရဲသီးလေးတွေ ခွဲစားလို့အပြီးမှာ အခွံတွေကို ပစ်ဖို့ခြံထဲကိုအသွား စည်းရိုးဖက် အမှောင်မှာ လရော...
ပန်းနွယ်ဖြစ်လျှင်… ပန်းနွယ်ဖြစ်စဉ် - (၁) မြူပြာပြာကြောင့် အဝေးက တောင်တန်းတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရဘူး။ တိမ်တိုက် ပါးလျလျ ဟိုတကွက် ဒီတကွက်နဲ့ ကောင်းကင်ဟာ မကြည်စင်လှဘူး။ လေ တချက်တချက် တိုက်လ...
Kyi Aye (Literature)
မလှတလှ ပုံပြင် - (၁) သည်ကိစ္စကို အစတုန်းက ဘယ်လိုရယ်လို့ အမည်မမှည့်တတ်ဘဲ ရှိနေသော်လည်း ယခုလို အသက်အစိတ်ကျော်၍ ကိုယ် စိတ် ဝေဒနာအစုံနှင့်လည်း ကြုံခဲ့ကာ ဇာတိ ဆိုသည်နှင့် မပြတ...
Random of Nang Nyi
အရူးလက်မှတ် - စိတ်ကျခြင်းပိုက်ကွန်ထဲ စိတ်လိုလက်ရ ဂျွမ်းပစ်ချကြရပုံက ရေကျချောင်း ပုဇွန်ဆိပ်ကလေးများလို....။ အလျော့ပေးနားလည်လိုက်ရခြင်း လျှော့ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ ကိုယ့်အဘိ...
ရွှေ့ ပြောင်းနှလုံးသားများ - မျှော်လင့်ချက်တွေ လေယာဉ်စီးပြီး ပျံသန်းလာခဲ့တယ် ရေခြား၊ မြေခြား၊ လူမျိုးခြား၊ သူစိမ်းတရံစာများဆီ။ မျှော်လင့်ချက်ထဲမှာ ဝှိုက်ကဒ်လေးလည်းပါ ဒုန်းခနဲမြည်သွားတ့...
ကို အိ ပ် မ က် ရှ င်
Better Vision Naturally - The Miracle of Clear Flashes - Check with your vision eye important settingamany years and we related to memory loss.them similar of worsening intoaprovide absorption outcome, inc...
"လူတွေ ညာတတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ ညာလို့ မရဘူး၊ လူတွေမေ့တတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ မမေ့တတ်ဘူး" - *"လူတွေ ညာတတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ ညာလို့ မရဘူး၊ လူတွေမေ့တတ်ပေမဲ့ သမိုင်းဟာ မမေ့တတ်ဘူး"* ....................................................
ရင်ကွဲနာ - photo credit to : Google မတွေ့ရက်တွေကြာခဲ့လေပြီ။ ၁ရက်မှ.၂ရက်. ၂ရက်မှ..၃ရက်။ ခုတော့ ၂ပတ်တိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ သူတို့တွေ နေလို့မှ ကောင်းကြရဲ့လား။ စီးကရက်တွေ...
How The Sun See You - သူတို့ မြင်တဲ့ ကိုယ့်တို့ ပုံရိပ် ။ ဒီ Video Clip လေး စတင်ကတည်း က သဘောကျလို့ ခဏခဏ ကြည့်ပါတယ်။ Artist Thomas Leveritt က Ultra Violet ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သ...
Teachers - Written and posted this on 2008 February 17. Let me post this again and thank my teachers. Forever grateful! ---.---.---.--- ပွညျထောငျစုနေ့၊ ကလေးမြားနေ့ ...
“ ဖြတ်မျဉ်းများ “ - အထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူး သွားလာ လှုပ်ရှားနေရင်းနဲ့ပဲ နောက်ကျောကဓါးဟာ နီးနီးလာခဲ့။ ပန်းပွင့်လေးတွေကို ငေးမောရင်း ပျော်ရွှင်စရာရှိရင် သာယာရယ်မောရင်း စိတ်ညစ်စရာရှ...
စိတ်၏စေရာနာခံလေသော တိမ် ကိုမိုးမြင့်တိမ်
အဖေမရှိတော့တဲ့ သုံးရာခြောက်ဆယ့်ငါး - - မိသားတစ်စု ခေါင်မဲ့သွားတာ သင်္ခါရတဲ့လား..အဖေ ။ မလွှဲမရှောင်သာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့အမှန်တရားမှာ တဆတ်ဆတ်နာနေတဲ့ ရင်တွေ ပန်းထွက်နေတဲ့ ကြေကွဲခြင်းတွေ တောက်စား...
အဆုံးသတ်ပေးပါ ..... - တော်ကြပါတော့ တိုက်နေကြတဲ့ စစ်တွေ ...။ တော်ကြပါတော့ ထားရှိနေတဲ့ အမုန်းတရားတွေ ...။ တော်ကြပါတော့ လွဲမှားနေတဲ့ နားလည်မှုတွေ ...။ တော်ကြပါတော့ ကြားခံနေတဲ့ တွေေ...
အနွေးထည် - ချစ်စဖွယ် ဖြူလွလွလေး ထွေးထွေး နွေးနွေးလေးရှိမယ့်ပုံ ။ ချစ်သူ့ဘဝ နှင်းတွေ တဖွဖွကျနေလိုက်တာ ရိုမန်တစ် ဆောင်းညများ တစ်ဘဝလုံး ဆောင်းချည့် တွေ့ရတော့မှာလို… “ခ...
အောင်ဆန်း (သို့မဟုတ်) အရိုင်း -
လူပျိုကြီးဖြစ်ခါစ ဒုက္ခများ - အင်း... ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့တင် ဘာရေးတော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့နော့်။ ဘ၀ကံခေလေသူမို့ ရုပ်ရည်လေးသနားကမားရှိတာတောင် မစွံ့နိုင်ရှာသေးသူလေးပါခင်ဗျာ။ တကယ်ပါ...
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျောက် သဲနဲ့မပက်နဲ့.... - မင်းလှည့်ပြန်သင့်ပြီ.. ကျိတ်ထားတဲ့အန်တွေမကျေမွခင် နာကျင်မဲ့စကားတွေမထွေးအန်ခင် တင်းကျပ်စွာစေ့ထားရတဲ့နှုတ်ခမ်း မပြတ်သေးခင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့လက်သီး...
ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
“THE CRADLE TO THE GRAVE” - အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကျနော့သားငယ်လေး "ဟိန်းအာကာ"ရဲ့ ရက် (၁၀၀)ပြည့် မွေးနေ့အလှူလေးမှာ သူ့အတွက် ကျနော် ရေးစပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ...
Petite ရဲ့ Shin Than Chinn
- အရာရာဟာ ကြယ်စင်တစ်လက်လို ကြွေတယ် ဖန်မီးအိမ်လေး မနိုင့်တနိုင်နဲ့ပေါ့ ကလေးဘ၀တုန်းက ဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူး တကယ်သိတဲ့ အရွယ်ကျတော့ နောက်ပြန်မဆုတ်တတ်ဘူး..... ဒ...
အမမြတ်နိုး၏ ကံကောင်းခြင်း အနာဂတ်ဆီသို့ ...
ဘလော့လိပ်စာ ပြောင်းလဲခြင်း - အပြောင်းအလဲကိုကြိုက်ပီး ပြောင်းလဲလို့ရတာမှန်သမျှ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ကိုယ်... နောက်ထပ် ဘလော့သစ်ကိုမွေးဖွားလိုက်ပါပီ..။ လောကမှာ ပြောင်းလဲလို့မရတာ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သစ...
Talkii about freedom